POND'SWhite Beauty Day Cream - 50 G | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
POND'S White Beauty Day Cream - 50 G
2016 နိုဝငျဘာ 22
My favourite day cream....
Pond's White Beauty Day Cream smells really nice and looks fresh. Makes skin stay elastic. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
2016 နိုဝငျဘာ 18
အသားအရေကို ဖြူစင်ဝင်းပစေပြီး အမည်းစက်တွေကို ပျောက်ကင်းစေလို့ နေ့စဉ်လိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
တစ်နေကုန် မျက်နှာ အဆီမပြန်လို့ ကြိုက်ပါတယ် နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
Pond အမှတ်တံဆိပ် White Beauty Day Cream သည် ညိုမည်ပျက်စီးနေသော ဆဲလ်များကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေပြီး အသားအရေကို ကြည်လင်ဝင်းပလာစေသည်။ Pro-Vitamin B3 ပါဝင်သည့်အတွက် အသားအရေကို ဖြူစင်ဝင်းပစေသည့် အမည်းစက်မျာကို သိသိသာသာကွယ်ပျောက်စေသည်။ အဆီပြန်ခြင်းမရှိဘဲ ပေါင်ဒါပုံစံနှင့် Matte အသွင်ပေးနိုင်သည်။ Pro-vitamin B3 ကဲ့သို့ အရည်အသွေးဖြင့် ပါဝင်ပစ္စည်းများကြောင့် အရေပြားအတွင်းပိုင်းရှိ ဆဲလ်များဖြစ်တည်မှုကို သဘာဝအတိုင်း ပုံမှန်ဖြစ်စေသည်။ Melanin ထုတ်လုပ်မှုကို ထိန်းချုပ်ပေးသည့်အတွက် အညို အမည်းစက်များ သိသိသာသာလျော့ပါးလာစေပြီး ကြည်လင်ဝင်းပသည့် အသားအရေကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ယခုပစ္စည်းအား Shop.com.mm Online Shopping Mall တွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် White Beauty Day Cream - 50 G